Kubhuka kuenda kuHawaii iko zvino sarudzo yehupenyu nerufu
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hawaii Kupwanya Nhau » Kubhuka kuenda kuHawaii iko zvino sarudzo yehupenyu nerufu
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Hurumende Nhau • Hawaii Kupwanya Nhau • Health News • nhau • Kuvakazve • chengetedzo • Technology • Tourism Kutaura • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Mahotera, zvinokwezva, zvekufambisa, zvitoro, uye nzvimbo dzekudyira zvave zvichirwira kuvhurazve bhizinesi muHurumende yeHawaii. Airlines anga achiwedzera nyowani dzekushanya sosi nzvimbo dzemusika kune Aloha Hurumende. Bhizinesi rakanaka - asi iri ibasa rekuzviuraya?
Sarudzo dziri kuuya. Hapana munhu muHurumende akashinga zvakakwana kuti ataure uye kumisikidza zvirambidzo zvinonyanya kudiwa kuti kufambise zvakanaka kuHawaii zvakare.
Ndeipi chikamu cheHawaii chisina kuchengeteka kushanyira izvozvi vafambi vasinganzwisise?
Chikamu chipi che “Hawaii haina kuchengetedzeka kuvaenzi”Vashanyi havanzwisise here pavanenge vachizadza mahombekombe eHawaii nematauro ari padyo nematauro, zvichiita kuti kuregera kushamwaridzana kusabviri?
Chikamu chipi che “Hawaii haina kuchengetedzeka kuvaenzi ” havasvike here kana iyo-awa-yakareba mitsara kumaresitorendi ari echinyakare?
Chikamu chipi che “Hawaii haina kuchengetedzeka vashanyi ” hazvinzwisisike kana vashanyi vasisagamuchirwa, zvipatara zviri kumhanya pa125% kugona, uye vane mukurumbira Aloha Mweya wakanyangarika?
Tourism iri kuramba ichikwira paOahu, Maui, Kauai, Lanai, Molokai, uye Big Island yeHawaii, kunyangwe hazvo Gavhuna weHawaii Ige, Lt.Gavhuna Green, mukuru weCDC, naJohn De Fries, CEO we Hawaii Tourism Chiremera, vari kukumbira vashanyi kuti varege kuenda ku Aloha Taura panguva ino.
Meseji yakajeka kune vese veko uye vashanyi ndeye "Zvakakosha kufamba chete!"
The mwero wekufa nhasi is epamusoro akambonyorwa muHawaii panguva yedambudziko re COVID-19.
Coranavirus Mhosva muHawaii
Musi waNyamavhuvhu 24, 2020, iyo Nyika yeHawaii yakanyoresa 169 nyowani COVID-19 makesi muzuva rimwe, zvichikonzera kurambidzwa kwakakomba uye kukiyiwa.
Musi waAugust 25, 2021, Hurumende yeHawaii yakanyoresa mazana matanhatu nemakumi maviri neshanu emakesi eCOVID-625 muzuva rimwe. Chete zvimwe zvidiki zvinorambidzwa uye hapana kukiya kwakadzika kuri munzvimbo.
COVID-19 Kufa muHawaii
Musi waNyamavhuvhu 24, 2020, hapana akafa muHawaii yeCOVID-19. Iyi yaive panguva yepamusoro pehosha.
Musi waAugust 25, 2021, vanhu vasere vakafa neCOVID-8 muHawaii, nhamba yepamusoro yakambonyorwa muzuva rimwe chete kubva pakatanga denda iri.
Kusvika Kwemhepo Traffic
Musi waNyamavhuvhu 23, 2019, vanhu 21,475 vakasvika kunhandare dzeHawaii kubva kunzvimbo dzekuDzimba dzeUS.
Musi waAugust 23, 2020, iyo nhamba yekusvika yakadzika kusvika pa1,700. Hapana akabaiwa jekiseni.
Musi waNyamavhuvhu 23, 2021, rekodhi yakazara yevafambi vanokwana 23,548 vakasvika panhandare dzeHawaii kubva kune dzimwe nyika makumi mana nenomwe dzeUS.
Kuverengerwa vatakuri-vePacific vafambi vekunze vanobva kune vamwe vese veUnited States vanosvika muHonolulu, Kahului, Lihue, Hilo, uye Kona.
Muna Nyamavhuvhu 2020 hapana akabayiwa jekiseni.
Muna Nyamavhuvhu 2021 vanodarika makumi manomwe muzana muHawaii vakagamuchira kanenge kamwe chete kemushonga weKubaya.
Sekureva kwaLt.Gavhuna Green, tiye chipatara chinzvimbo chekugara muHurumende yeHawaii ikozvino 125%. Vanhu vane chirwere chemwoyo uye zvimwe zvirwere zvakakomba havachakwanise kuwana maICU nekuda kwenhamba yepamusoro yevarwere veCoronavirus.
Hawaii iri kurwara. Hawaii yakanyanya kurwara kupfuura nyika senge maBahamas semuenzaniso ari pasi peTier 4 US yekuyambira yekufamba achiti:
USASHAMUKE PANGUVA IYI !
Vashanyi vanofanira kuratidza zvimwe ALOHA kuvanhu veHawaii uye gara kumba.
Tourism ndeye sosi hombe chete yemari yakazvimiririra ye Hupfumi hweHawaii. Muna 2019, hupfumi hweHawaii hwekushanya hwakanyora:
➢ State Tax Revenue: $ 2.07 bhiriyoni (+1.4%, + $ 28.5 mamirioni YOY maringe na2018).
➢ Vashanyi Vanosvika mu2019: 10,424,995.
Hupfumi vs. Hutano
Iye anokunda zvakajeka anoita kunge hupfumi hwekushanya muHawaii. Zvichida izvi ndizvo zvinorwisa-kupora varatidziri vane pfungwa pavanoratidzira pamberi pemusha waLt.Gavhuna Green.
Nyamavhuvhu 25, 2021 pa14: 55
Iyo poindi ndeyekuti: Zvipatara zvedu zvinomhanya pa125% kugona pasina mibhedha yeICU inowanikwa. Hazvinyatso kuita mutsauko ndiani ari kuunza hutachiona kuHurumende yedu. Isu taifanira kunge takamboita hurukuro iyi kare.
Nyamavhuvhu 25, 2021 pa13: 56
Kana iwe uchizonyora bhatani rekukwikwidza musoro wenyaya seizvi zvirinani tora girama izvo! Kunyange huwandu hwacho huri hwechokwadi pane zero humbowo kushanya kune chekuita nekupararira kuno.